Wafdi Wasiiro & Xildhibaano ah oo ku Wajahan Cadaado – XAMAR POST
Wafdi Wasiiro & Xildhibaano ah oo ku Wajahan Cadaado
Wafdi Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah ku wajahan magaalada Cadaado, si ay ugu biiraan wafuuda ku sugan magaalada ee ku baxay xaalada siyaasadeed ee ka jirta Galmudug.
Sida ay sheegayaan wararka Wasiirada iyo Xildhibaanada ayaa la sheegay inay ka soo jeedaan deegaanada Galmudug, waxaana ay taageersan yihiin Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo Madaxweyne kuxigeenka oo ka hor-jeeda Madaxweyne Xaaf.
Wafdiga ku wajahan Cadaado ay ka mid yihiin Wasiiru dowlaha Howlaha Guud Axmed Qoor Qoor, Xildhibaan Cabdi Axmed Dhuxulow Dhegdheer, Xildhibaan Yuusuf Geelle Dhagey iyo xildhibaano kale.
Wararka qaar ayaa sheegaya in wafdiga Wasiirada iyo Xildhibaanada maanta ku wajahan Cadaado ay ka soo horjeedaan Xildhibaanada shalay gaaray Cadaado, kuwaasoo intooda badan yihiin kuwo mucaaradsan Xukuumadda.
Xildhibaano iyo Senator ayaa shalay gaaray Cadaado, kuwaasoo gaarayay illaa 13 xubnood, waxaa hoggaaminayay Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Aqalka Sare Abshir Bukhaari, waxaana ay kulamo la qaadeen labada dhinac ee khilaafka u dhaxeeya, waxaana wali la isku afgaran heshiis rasmi ah oo laga gaaro xaalada siyaasadeed ee Galmudug.
Xiisada siyaasadeed ee ka jirta Galmudug ayaa cirka isku shareertay, kaddib markii Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Galmudug ay sheegeen inay xilka ka qaadeen Madaxweyne Axmed Ducaale Xaaf.
SAWIRRO: M/weyne Farmaajo oo la kulmay Dhaxal-Sugaha Boqortooyada Sacuudiga Carabiya